Ikuku a na-ahụ anya na-enye nnwale ụbọchị iri na ise (*15*) maka ndị ọrụ ọhụrụ
Ị chọrọ ịnwale ikuku ikuku na-ahụ anya? Ị nọ na chi: onye ọrụ akwụgoro ebidola mmemme nnwale n'efu ụbọchị iri na ise iji dọta ndị ahịa ọhụrụ naanị maka iPhones, ndị ọrụ na-enyocha koodu QR na ...
Ọ bụrụ na ị na-achọ inweta ego iPad dị ọnụ ala, ị nọ na chioma. Anyị hụrụ Apple's 2021-inch iPad 10.2 na ngwaahịa na ọrịre maka naanị € 299 (site na € 329) na Amazon. Nke a bụ ọnụ ahịa kacha ala anyị hụworo yana ọmarịcha nkwekọrịta maka ndị ...
Enwere otu mpaghara ebe Microsoft meriri Apple: na ikike idozi
Microsoft weputara vidiyo gọọmentị na-egosi ka ọ dị mfe imeghe Laptop SE nke dị n'elu ma dochie ihe ndị dị mkpa, ndị asọmpi dị ka Apple kwesịrị ịnọdụ ala wee dee ihe n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ndị na-emepụta ngwaọrụ, ọkachasị Microsoft na ...
Enwere netwọk 200 5G ugbu a na mba 87 gburugburu ụwa
Ọnụ ọgụgụ ọrụ 5G dị n'ahịa ruru 200 ka ọ na-erule njedebe nke 2021, dị ka Global Service Providers Association (GSA), nke kwuru na ndị na-ebu ọrụ 99 na-enyocha teknụzụ ma ọ dịkarịa ala kwụụrụ onwe (SA 5G). Ihe dị ka mba 78 ugbu a nwere opekata mpe. otu netwọk 5G ...
Ekwentị mpịachi ọhụrụ nke Honor buru ibu ma sie ike karịa Galaxy Z Fold 3
Ọnwa ole na ole gara aga ewetala ọnụ ọgụgụ ekwentị mbụ a na-emegharị emegharị, ma ugbu a Honor bụ ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ ịbanye na ntụrụndụ ahụ, yana ngwaọrụ ọhụrụ karịrị Galaxy Z Fold 3 n'ihe gbasara nkọwapụta. Ekwentị ọhụrụ a, malitere na ... .
Ụbọchị mwepụta iPhone SE 3 nwere ike ịbụ Machị ma ọ bụ Eprel
Anyị na-eche iPhone SE 3 ogologo oge, na iPhone SE (puku abụọ na iri abụọ) ka ewepụtara kemgbe April puku abụọ na iri abụọ. Ma o yiri ka ihe nlereanya na-esote na-aga ịdaba, dị ka isi iyi siri ike siri kwuo. A ga-akpọsa ya na March ma ọ bụ ...